Aleo hifanatrehana rehefa tsy mifampatoky… | NewsMada
Aleo hifanatrehana rehefa tsy mifampatoky…
Par Taratra sur 18/11/2017
Mila hajaina sy hampiharina araka ny tokony ho izy, hono, ny lalàna; maika, hono, isika amin’ny fanatanterahana ny fifidianana. Izany indray ny honohono afitsoky ny mpitondra ambony isany tato ho ato. Atao hoe honohono, satria tsy marina, tsy araka ny tena zava-misy. Nahoana? Tsy atao tsinona izay lazaina; izay atao, tsy lazaina.
Iza indray no tsy mahalala na minia mikimpy sy mitampin-tsofina aza fa efa hatrany am-piaingana no fatra-tsy mpanaja lalàna izao fitondrana izao? Teo, ohatra, ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana momba ny fanolarana praiminisitra. Toy izany koa ny And. 72 momba ny tsy fahazoan’ny solombavambahoaka miova vondrona parlemantera.
Ny antoko politika tsy mbola nisy akory tamin’ny fifidianana solombavambahoaka no manana ny maro anisa indrindra eny anivon’ny Antenimierampirenena. Nahoana? Ao raha… Fanajana lalàna? Tsy avelan’ny birao maharitra hanao fanadihadiana ifotony ny Bianco, raha nisy tokoa na tsia ny kolikoly. Ny fatra-panidy trano, fangalarina?
Inona no mampievotrevotra ny mpitondra amin’ny fanajana sy fampiharana lalàna amin’ny fifidianana amin’izany? Mipetraka ho tantara ny hosoka sy hala-bato maharikoriko tamin’ny fifidianana kaominaly, 31 jolay 2015. Toy izany koa tamin’ny fifidianana senatorialy, nividianana sy nandrahonana ary nanerena mpifidy vaventy.
Ny antoko eo amin’ny fitondrana amin’izao no matanjaka indrindra, manana olom-boafidy be indrindra, atokisan’ny vahoaka indrindra, manaja lalàna indrindra, tsy matahotra fifidianana indrindra… Marina ve izany? Eo ny vahoaka hitsara amin’ny fifidianana, raha tena hangarahara, tsy hisy hosoka sy hala-bato, hoeken’ny rehetra…
Misy antony ao matoa miseho hanaja lalàna ny mpitondra? Eny, na tsy mpanao izany aza. Misy antony koa ao matoa dieny aty amin’ny fandrafetana volavolana lalàm-pifidianana dia miady mafy izay hisian’ny fangaraharana ny antoko politika sy ny firaisamonina sivily. Aleo ho hita hifanatrehana rehefa tsy mifampatoky? Ho hita eo…